Somali news – Page 3 – Banaadir weyne
Diyaarad ku burburtay Iiraan oo ay 60 qof ku dhinteen
18 Febraayo, 2018 KONSTANTIN VON WEDELSTAEDT Lixdan iyo lix qof ayaa dhimatay ka dib markii diyaarad ay saarnaayeen ay ku burburtay dalka iiraan. Diyaarad sidday rakaab gaaraya 60 qof ayaa ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla bartamaha dalka Iiraan. Diyaarad sidday rakaab gaaraya 60 qof ayaa ku burburtay dhul buuraley ah oo ku yaalla bartamaha dalka Iiraan. ...
IGAD oo ka Shirtay Wax ka Qabashada Caafimaadka Qaxootiga
18 Febraayo, 2018 Magaalada Jabuuti waxa lagu soo gaba-gabeeyay shir dalalka IGAD ay isugu yimaaddeen, kaas oo looga hadlayay wax ka qabashada baahiyaha caafimaad ee qaxootiga ay qabaan. Warbixintan waxa soo direy Ramadan Muuse. Shirka IGAD ee Qaxootiga 0:005:475:23 Direct link Pop-out player – VOA Somali News
Kulan kale oo Ganacsatada Muqdisho iyo Wasaaradda Maaliyadda isku mari waayeen
18 Febraayo, 2018 Kulan kale oo ay yeesheen Guddiga Ganacsatada Gobolka Banaadir iyo Wasaaradda Maaliyadda ayaa la isku mari waayay, kaddib markii Ganacsatada ay diideen codsi ku aadan inay dib u furaan suuqyada ganacsi, si xal looga gaaro muranka Ganacsatada Muqdisho iyo dowladda ee ka dhashay canshuurta Iibka ee lagu soo rogay. Wasaaradda Maaliyadda ayaa ku adkeysaneysa canshuurta Iibka ...
02/17/2018	Leave a comment
17 Febraayo, 2018 Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Jen. C/wali Jaamac Xuseen (Gorod) ayaa jawaab kulul u diray La Taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweyne Farmaajo Cabdisaciid Muuse Cali, kaasoo horay u qoray warqad talo soo jeedin aheyn oo ka hadleysay arrimaha ciidamada xoogga dalka iyo in aan amar la’aan la qeybin hubka iyo rasaasta, isla markaana aan macluumaadka lala wadaagi ...
17 Febraayo, 2017 Isiolo – Saraakiil ka tirsan Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in ay dileen xubin ka tirsan Xarakada Al Shabaab, isla markaana ay gacanta ku dhigeen labo kale, kadib iska hor imaad muddo kooban ku dhex maray deegaanka Merti oo ka tirsan Isiolo halkaas oo la sheegay in ay ku dhuumaaleysanayeen. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in ...
17 Febraayo, 2018 Maxkamad kutaala magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta dalka Kenya ayaa 10-sano oo xabsi ah ku riday xaaskii Sheekh Aboud Rogo Mohammed oo Sanadkii 2012kii lagu dilay Magaalada Mombasa. Hania Sagar oo aheyd Xaaskii Sheekh Rogo ayaa lagu eedeeyay in ay taageertay koox weerar ku qaaday saldhig booliis oo kuyaala magaalada Mombasa, waxaana weerarkaasi lagu dilay sadex ...
17 Febraayo, 2018 Muqdisho – Dhalinyaro Soomaaliyeed oo garaya ilaa iyo 11 qof ayaa laga soo dayay dalka Liibiya oo u xeraa dad la sheegay in aay ahaayen muqalasiin oo dadka tahriibiya. Dhalinyaradaan ayaa laga soo dajiyay goroonka Diyaaradaha ee magaalada Muqdisho,waxaana ka muuqatay markii ay ka soo dageen garoonka diyaarada Adan Cadde ee magaalada Muqdisho faraxad aan la ...
17 Febraayo, 2018 Muwaadiniin Ruush ah oo lagu eedeyay farogelintii doorashada Mareykanka. Madaxa baaritaanada farogelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii ka dhacday Mareykanka, Robert Mueller ayaa saddex iyo toban qof oo u dhashay dalka Ruushka ku eedeyay inay ku lug lahaayeen farogelinta Ruushka uu ku sameeyay doorashadii ka Mareykanka. Sidookale dhowr shirkadood oo laga leeyahay dalka ...
17 Febraayo, 2018 Berlin – Ciidamada Ammaanka Dalka Jarmalka ayaa qabtay Muwaadin Soomaali ah oo looga shakisan yahay in uu xiriir la leeyahay Xarakada Al Shabaab. Dacwad ogayaal heer Federaal ah ayaa sheegay in ninkaan gacanta lagu soo dhigay Khamiisti isagoo ku sugnaa gobolka Hesse ee bartamaha Germany, kaasi oo magaciisa lagu soo koobay C/qaadir, sida ay qortay Wakaaladda ...
16 Febraayo, 2018 Jowhar – Waxaa Gobolka Shabeelaha Dhexe lagu heshiisiiyay Beelo Walaalo ah oo xur guf u dhexeysa ay ka taagneed inta u dhexeysa degmooyinka Cadalle iyo Raage Ceelle ee Gobolkaasi. Sida uu Idaacadda Shabelle u xaqiijiyay Xildhibaan Ismaaciil Muumin Hilowle waxaa Heshiiskaasi ka qeyb qaatay Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Shabeelaha Dhexe iyo Siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanadaasi. Xubnaha ...
Banaanbax lagu taageerayay go’aankii ICJ oo ka dhacay Magaalada Muqdisho
Mogadishu: Madaxweynaha oo shir xasaasi ah la yeeshay Guddiga amniga
Sheekh sharif iyo mar 2aad
DEGDEG: Madaafiic qasaare geystay oo ku dhacay xaafado ku dhow garoonka diyaaradaha Muqdisho
Saraakiil ka tirsan Hay’adda Socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo maanta tababar loogu qaaday dalka Sacuudiga
Galmudug Oo Digniin U Dirtay Siyaasiyiinta Ka Soo Jeeda Deegaanada Maamulkaas
Waxaa Soo Degtay Dayuurad Sitay Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur Iyo…